यी हुन् शक्तिशाली महिला जो प्रतिस्पर्धामा अब्बल बने ! | mulkhabar.com
February 8, 2018 | 11:09 pm 382 Hits
नेपाल पितृसत्तातमक राज्य हो । पुरुष प्रधान समाजमा पुरुषलाई पहिलो र महिलालाई दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरिन्छ । नेपालमा नयाँ संविधानमा समान अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ र पुरुष र महिला समान हुन् भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता स्थापित गरिएको छ । तर व्यवहारमा भने अझै महिलालाई कमजोर र अबला नै प्रमाणित गर्ने कोशीष भइरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हालै सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा महिललाई प्रत्यक्षमा दिएको उम्मेदवारीको अवसर र प्राप्त परिणाम नै हुन सक्छ ।
महिलाहरुले प्रतयक्ष निर्वाचत हुन सक्दैनन त्यसैले महिलालाई अगाडि ल्याउन समानुपातिक कोटा निर्धारण गरिएको हो भन्ने मान्यता नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुमा व्याप्त छ । महिलाहरुले पैसा खर्च गर्न सक्दैनन् र चुनाव जित्न सक्दैनन् भनेर अधिकांश पुरुषहरु प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनेर महिलाहरुलाई समानुपातिकको कोटामा नाम सिफारिस गरिएको देखिन्छ ।
महिलाहरुलाई कमजोर भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गरेका थिए । उनीहरुले महिलालाई अत्यन्तै न्यून संख्यामा उम्मेदवार बनाए । प्रतयक्ष तर्फ जनालाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।
प्रदेशसभातर्फ २० जना महिला मध्ये ६ महिलाले ठूला दलबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । यस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ १ सय २६ र प्रदेशतर्फ २ सय ९ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
उम्मेदवारी दिन कन्जुस्याईं गरिएपनि जति महिलाहरुले प्रत्यक्षमा उमेदवारी पाएका थिए उनीहरुले सबल र बलिया भनिएका पुरुष उम्मेदवारहरुलाई पराजीत गरी निर्वाचीत हुन सफल भएका छन् । सामान्य मात्रै होइन भारी मतान्तरसहित विजयी भएर महिलाहरुले आफूहरु पुरुष सरह सक्षम छौं भन्ने प्रमाणित गराएका छन् ।
विजयी महिला उम्मेदवार मध्ये कञ्चनपुर क्षेत्र नं १ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको रुपमा माओवादी केन्द्रकी बिना मगरले सबै भन्दा बढी मत अन्तरले आफ्ना पुरुष प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गरेकी छन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्यांजा क्षेत्र नं २ बाट प्रतिस्पर्धामा रहेकी अर्यालले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा बहालवाला शिक्षा तथा उपप्रधान मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई पराजीत गरिन् । बाम गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनेकी एमाले जिल्ल अध्यक्ष अर्यालले श्रेष्लाई ३ हजार ७ सय ६ मतान्तरले . पराजित गरेकी हुन् । अर्यालले अर्यालले ३५ हजार १ सय ४२ मत पाउँदा श्रेष्ठले ३१ हजार ४ सय ३६ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एकमात्र क्षेत्र रहेको प्यूठानमा वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रा।डा।गोविन्दराज पोखरेललाई १६ हजार २ सय २८ मतान्तरले पराजित गरिन् ।
पौडेलले ४७ हजार ५ सय १४ मत ल्याइन् भने कांग्रेस उम्मेदवार तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा। पोखरेलले ३१ हजार २८६ मत पाए ।
त्यस्तै झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार नेकपा एमालेकी पवित्रा निरौला खरेलले १३ हजार ७ सय ६७ मत बढी ल्याई नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उद्धव थापालाई पराजित गरिन् । खरेलले ४५ हजार ८ सय १७ मत ल्याईन् भने थापाले ३२ हजार ५० मत ल्याएका थिए ।
ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पम्फा भुसाल आफ्ना प्रतिस्पर्धी भन्दा १ हजार ७ सय ७ मत बढी ल्याई विजयी भईन् । वाम गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बनेकी माओवादी केन्द्रकी नेता तथा प्रबक्ता भुसालले २४ हजार ३७ मत ल्याइन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका मदन अमात्यले २२ हजार ३ सय २९ मत ल्याएका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्यमा मकवानपुर क्षेत्र नं १ को ९क० बाट वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार, माओवादी केन्द्रकी कुमारी मोक्तानले लोकतान्त्रिक गठबन्धनका यतिराज सापकोटा भन्दा १२ हजार ९ सय ९६ मत बढी ल्याई पराजित गरिन् । मोक्तानले २७ हजार १ सय ३२ मत ल्याइन् भने सापकोटाले १४ हजार १ सय ३६ मत ल्याएका थिए ।
सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ ९ख० बाट वाम गठबन्धनकी बेची लुङगेलीले नेपाली कांग्रेका शेष साह दुल्लाहलाई पराजित गरिन् । उनले ६ हजार १ सय ६६ मतअन्तरले दुल्लाहलाई पराजित गरेकी हुन् । लुङगेलीले १५ हजार ३ सय ६३ मत ल्याएकी छन् भने दुल्लाहले ९ हजार १ सय ९७ मत प्राप्त गरेका थिए ।
उदयपुर क्षेत्र नं।२ ९ख० प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार कला घलेले निकटतम् प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका रामकुमार खत्रीलाई पराजित गरिन् । उनी खत्री भन्दा ४ हजार ४ सय ८४ मत बढी ल्याई विजयी भइन् । घलेले १३ हजार ४ सय ५९ मत ल्याएर विजयी भएकी हुन् । खत्रीले ८ हजार ९ सय ७६ मत प्राप्त गरेका थिए ।
कृष्णा केसी ९नमुना०
बाँके क्षेत्र नं १ प्रदेशसभा ९क० बाट बाम गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी नेता कृष्णा केसी ९नमुना०ले निकतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका शरद चन्द्र बर्मालाई ३ हजार १ सय ९६ मत अन्तरले पछि पार्दै विजयी भइन् । केसीले १३ हजार ४ सय ३६ मत प्राप्त गरिन् भने काँग्रेसका बर्माले १० हजार २सय४० मत प्राप्त गरेका थिए ।
म्याग्दीको प्रदेशसभा ‘ख’ बाट वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार नेकपा एमालेकी नरदेवी पुन मगरले २ हजार ८ सय ७८ मत बढी ल्याई आफ्ना निकटतम् प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका अमलाल फगामीलाई पराजित गरिन् । मगरले १० हजार ८ सय ६८ मत ल्याईन् भने फगामीले ७ हजार ९ सय ९० मत ल्याएका थिए ।
ललितपुर क्षेत्र नं। १ को ९क० को प्रदेशसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी लालकुमारी पुनले कांग्रेसका ऋषिराम घिमिरेलाई २ हजार ७ सय ३६ मत अन्तरले पराजित गरिन् । पुनले १२ हजार ८ सय ४१ मत ल्याएर विजयी भइन् भने घिमिरेले १० हजार १ सय ५ मत प्राप्त गरी पराजित भए ।
तनहुँ क्षेत्र नं २ को ‘क’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा आशा कोइरालाले पाँच मतको अन्तरले कांग्रेसका उम्मेदवार प्रदिप पौडेललाई पराजित गरिन् । कोइरालाले १६ हजार ६ सय ४६ मत प्राप्त गरी विजयी भईन् भने पौडेलले १६ हजार ६ सय ४१ मत पाएका छन् ।
यस्तै बारा क्षेत्र नम्बर ३ ९क० बाट वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी ज्वाला साह प्रदेशसभा सदस्यमा कांग्रेसका रामनन्द परसाद यादवलाई पराजित गर्दै विजयी भईन् । उनले १ हजार ६२४ मत अन्तरले यादवलाई पराजित गरेकी हुन् । साह ११ हजार ७ सय ७१ मत प्राप्त गरिन् भने गरिन् भने यादवले १० हजार १ सय ४७ मत प्राप्त गरे ।
महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ को ९क० बाट प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार नेकपा एमालेकी शारदा थापाले १ हजार २ सय ५१ मत बढी ल्याई नेपाली कांग्रेसका प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीलाई पराजित गरिन् । उनले १० हजार २ सय ८२ मत पाएकी छन् भने क्षेत्रीले ९ हजार ३१ मत पाए ।